Shabaab oo firxadkooda looga digayo deriska | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Shabaab oo firxadkooda looga digayo deriska
Shabaab oo firxadkooda looga digayo deriska
Ra’iisulwasaaraha dawladda dhexe ee Soomaaliya, Cabdiweli Sheekh Axmed oo shir jaraa’id ku qabtay aqalka madaxtooyada ayaa ugu hambalyeeyay ciidamadda isbaheysiga wuxuu ugu yeeray “guulo waaweyn” oo ay ka gaadheen hawlgalka badweynta Hindiya ee ka socda inta badan gobollada koofurta iyo bartamaha.
Shirkaasi jaraa’id oo ay ra’iisulwasaaraha ku wehliyeen wasiiraddiisa difaaca, amniga qaranka, arrimaha gudaha iyo taliyeyaasha talisyada kala duwan ee ciidamadda Soomaaliya ayuu ku sheegay in dib u qabsashada degmooyinka xeebaha dhaca ee Cadale iyo Baraawe ay muhimad gaadh ah siinayso dagaalka ka dhanka ah dagaalyahanka xarakada Shabaab ee Soomaaliya.
Cabdiweli Sheekh Axmed ayaa sidoo kale faray taliyeyaasha ciidamadda huwanta inay si degdeg ah isugu furaan waddooyinka gobollada ay ka saareen Al-shabaab si buu yiri dhowaan loo gaadhsiiyo gurmadka ay u baahan yihiin shacabka ku nool gobolladaasi.
Dhinaca kale, Cabdiweli wuxuu ugu qaabay dalalka jaarka la ah Soomaaliya inay kasii feejignaadaan firxadka Shabaab oo uu yiri waxay u babac dhigi waayeen culeyska farahabadan ee ay ku hayaan ciidamadda huwantu.
Shabaab ayaa imminka wejihaya duullaankii ugu weynaa abad – ma ahan oo keliya duqeymaha cirka, balse AMISOM oo kaabaysa ciidamadda dawladda ayaa dagaal dhinaca dhulka ah ku qaaday magaalooyinka ay maammulaan xarakadaasi.
Previous articleAfgooye oo uu ka dhacay qarax khasaare geystay
Next articleGallan oo ku dhawaaqay in gobolku nabad yahay